အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမယ့် ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် shortcut key များ - For her Myanmar
ဒါတွေ ဒီလိုသုံးလို့ရတာမသိခဲ့ဘူး အခုတော့ စကေးတွေတက်ပြီလေ
အလုပ်မှာ ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါ နေရာတကာ မောက်စ်ကြီးတကားကားနဲ့ တစ်ခုချင်းလိုက်နှိပ်နေရရင် အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ တကယ် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုတာ ကီးဘုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အဆင်ပြေပြီး မောက်စ်လုံးဝသုံးစရာမလိုပါဘူးတဲ့။ ပြောကြတာပေါ့ 😀 မလိုအပ်ဘဲတော့ မောက်စ်ဘယ်ထည့်ထားမလဲနော်.. ဒါပေမဲ့ ကီးဘုတ်ကို စနစ်တကျနဲ့ ပရိုဆန်ဆန် သုံးတတ်ရင်တော့ အရာရာက လွယ်လွယ်လေး ဖြစ်သွားနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
အဲဒီတော့ အက်ဒမင်က ယောင်းတို့အလုပ်မှာ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ့် Shortcut Key လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
Ctrl (Control Key) နဲ့ တွဲဖက်သုံးရသော Shortcut များ
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Page နဲ့ အလားတူ နောက်ထပ် စာမျက်နှာအသစ် ထပ်ခေါ်ဖို့ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ Browser သုံးနေရင်း Ctrl+N နှိပ်လိုက်ရင် နောက်ထပ် Browser window အသစ်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာမှာပါ။ MS Word သုံးနေရင်း နှိပ်လိုက်ရင်လည်း နောက်ထပ် စာမျက်နှာအသစ် ထပ်ပေါ်လာမှာပေါ့။
File ထဲက Open ကို သွားနှိပ်စရာမလိုဘဲ ဒီ Shortcut သုံးလိုက်ရင် ပွင့်လာမှာပါ။
Ctrl+A (All )
စာသား (Text) တွေ အားလုံးကို Select လုပ်ပေး (ရွေးချယ်ပေး)မှာပါ။
Select လုပ်ထားသမျှ စာသားတွေအားလုံးကို စာလုံးအမည်း(Bold) ပြောင်းပေးမှာပါ။
Select လုပ်ထားသမျှ စာသားတွေအားလုံးကို စာလုံးအစောင်း (Italics) ပြောင်းပေးမှာပါ
Select လုပ်ထားသမျှစာသားတွေအားလုံးကို အောက်ခံမျဉ်း (Underlined) တားပေးမှာပါ
လက်ရှိအလုပ်တွေကို သိမ်းဆည်းလို့ ရပါတယ်။
Select လုပ်ထားသမျှစာသားတွေအားလုံးကို Cut လုပ်ပေးမှာပါ
Word ထဲမှာ အသုံးများပါတယ်။ ဥပမာ – You are so beautiful. လို့ ရေးပြီးတာနဲ့ Ctrl+Y နှိပ်လိုက်ရင် You are so beautiful ပဲ ပြန်ပေါ်တာမျိုးပေါ့။ နောက်ဆုံးလုပ်ထားတာကို ပြန်ထပ်ပြီး လုပ်တာပါ။
နောက်ဆုံးလုပ်ထားတာကို အစက ပြန်လုပ်ချင်ရင် သုံးလို့ရပါတယ်။
Select လုပ်ထားသမျှ စာသားတွေအားလုံးမှာ Website Link တွေ၊ ကိုယ် လင့်ခ်ချိတ်ချင်တဲ့ ပုံ၊ Folder၊ ဖိုင် စသဖြင့် ထည့်လို့ရပါတယ်။
Print ထုတ်ချင်တဲ့အခါ သုံးလို့ရပါတယ်။
Ctrl+Home (move to start)
Microsoft Word နဲ့ အလားတူ Software တွေ သုံးတဲ့အခါ မူရင်း စာမျက်နှာ (သို့) Document ရဲ့ ထိပ်ဆုံးကိုသွားလို့ရပါတယ်။ စာပိုဒ်တွေ ဘာတွေဆိုလည်း အစကို ရောက်သွားတာမျိုးပေါ့
Ctrl+End (move to end)
Microsoft Word နဲ့ အလားတူ Software တွေသုံးတဲ့အခါ စာမျက်နှာ (သို့) Document ရဲ့ အဆုံးကိုသွားလို့ရပါတယ်။ စာပိုဒ်တွေရဲ့ အဆုံးကိုလည်း သွားလို့ ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံးစီ မြန်မာစာဆိုရင် စာစုတစ်စုစီ ဘေးဘယ်ဘက်ကို ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ (ဥပမာ I’ll be by your side မှာ side ရဲ့ အဆုံးမှာ cursor ချပြီး ctrl+Left arrow key ကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် side ရဲ့ s အရှေ့ကို cursor ပြန်ရောက်သွားမှာပါ။ )
အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံးစီ မြန်မာစာဆိုရင် စာစုတစ်စုစီ ဘေးညာဘက်ကို ရွှေ့လို့ရပါတယ်။
Ctrl+Esc (start menu)
START menu ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Alt (Alter Key) နဲ့တွဲဖက်သုံးရသော Shortcut များ
Alt+F4 လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Software (သို့) Program ကို ပိတ်လို့ရပါတယ်။
Alt+F လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Software (သို့) Program ရဲ့ File menu ကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Alt+Tab လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Software တွေ၊ Program တွေ တစ်ခုကနေ တစ်ခုကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။
အခြား Shortcut များ
F2 File (သို့) Document ရဲ့ နာမည်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။
Home စာကြောင်းရဲ့ အစကို သွားလို့ရပါတယ်။
End စာကြောင်းရဲ့ အဆုံးကိုသွားလို့ရပါတယ်။
Shift+Home အစကနေ လက်ရှိနေရာအထိ Select မှတ်လို့ ရပါတယ်။
Shift+End အစကနေ လက်ရှိနေရာအထိ Select မှတ်လို့ ရပါတယ်။
တကယ်တော့ Shortcut Key တွေက အများကြီးပါပဲ။ Ctrl key တွေဆိုလည်း A to Z အကုန်လုံးနဲ့ တွဲပြီး သုံးလို့ ရပါတယ်။ Alt key တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါတွေကတော့ အသုံးများတဲ့ shortcut key တွေပေါ့နော်.. တကယ်လို့ ယောင်းတို့ ဒီထက်မက သိချင်တယ်ဆိုရင် အက်ဒ်မင်တို့ နောက်ထပ် နောက်ထပ် ဆက်ပြီး တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ ကွန်မန့်လေးသာ ပေးသွားကြနော်.. :*
References : computerhope, ezcomputersolutions
ဒါတှေ ဒီလိုသုံးလို့ရတာမသိခဲ့ဘူး အခုတော့ စကေးတှတေကျပွီလေ
အလုပျမှာ ကှနျပြူတာသုံးတဲ့အခါ နရောတကာ မောကျဈကွီးတကားကားနဲ့ တဈခုခငျြးလိုကျနှိပျနရေရငျ အဆငျမပွတေော့ပါဘူး။ တကယျ ကှနျပြူတာကြှမျးကငျြတဲ့သူဆိုတာ ကီးဘုတျတဈခုတညျးနဲ့ အဆငျပွပွေီး မောကျဈလုံးဝသုံးစရာမလိုပါဘူးတဲ့။ ပွောကွတာပေါ့ 😀 မလိုအပျဘဲတော့ မောကျဈဘယျထညျ့ထားမလဲနျော.. ဒါပမေဲ့ ကီးဘုတျကို စနဈတကနြဲ့ ပရိုဆနျဆနျ သုံးတတျရငျတော့ အရာရာက လှယျလှယျလေး ဖွဈသှားနိုငျမှာ အသအေခြာပါပဲ။
အဲဒီတော့ အကျဒမငျက ယောငျးတို့အလုပျမှာ အခြိနျကုနျသကျသာအောငျ အလှယျတကူသုံးလို့ရမယျ့ Shortcut Key လေးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးမယျနျော။
Ctrl (Control Key) နဲ့ တှဲဖကျသုံးရသော Shortcut မြား
လကျရှိသုံးနတေဲ့ Page နဲ့ အလားတူ နောကျထပျ စာမကျြနှာအသဈ ထပျချေါဖို့ သုံးပါတယျ။ ဥပမာ Browser သုံးနရေငျး Ctrl+N နှိပျလိုကျရငျ နောကျထပျ Browser window အသဈတဈခု ထပျပျေါလာမှာပါ။ MS Word သုံးနရေငျး နှိပျလိုကျရငျလညျး နောကျထပျ စာမကျြနှာအသဈ ထပျပျေါလာမှာပေါ့။
File ထဲက Open ကို သှားနှိပျစရာမလိုဘဲ ဒီ Shortcut သုံးလိုကျရငျ ပှငျ့လာမှာပါ။
စာသား (Text) တှေ အားလုံးကို Select လုပျပေး (ရှေးခယျြပေး)မှာပါ။
Select လုပျထားသမြှ စာသားတှအေားလုံးကို စာလုံးအမညျး(Bold) ပွောငျးပေးမှာပါ။
Select လုပျထားသမြှ စာသားတှအေားလုံးကို စာလုံးအစောငျး (Italics) ပွောငျးပေးမှာပါ
Select လုပျထားသမြှစာသားတှအေားလုံးကို အောကျခံမဉျြး (Underlined) တားပေးမှာပါ
လကျရှိအလုပျတှကေို သိမျးဆညျးလို့ ရပါတယျ။
Select လုပျထားသမြှစာသားတှအေားလုံးကို Cut လုပျပေးမှာပါ
Word ထဲမှာ အသုံးမြားပါတယျ။ ဥပမာ – You are so beautiful. လို့ ရေးပွီးတာနဲ့ Ctrl+Y နှိပျလိုကျရငျ You are so beautiful ပဲ ပွနျပျေါတာမြိုးပေါ့။ နောကျဆုံးလုပျထားတာကို ပွနျထပျပွီး လုပျတာပါ။
နောကျဆုံးလုပျထားတာကို အစက ပွနျလုပျခငျြရငျ သုံးလို့ရပါတယျ။
Select လုပျထားသမြှ စာသားတှအေားလုံးမှာ Website Link တှေ၊ ကိုယျ လငျ့ချခြိတျခငျြတဲ့ ပုံ၊ Folder၊ ဖိုငျ စသဖွငျ့ ထညျ့လို့ရပါတယျ။
Print ထုတျခငျြတဲ့အခါ သုံးလို့ရပါတယျ။
Microsoft Word နဲ့ အလားတူ Software တှေ သုံးတဲ့အခါ မူရငျး စာမကျြနှာ (သို့) Document ရဲ့ ထိပျဆုံးကိုသှားလို့ရပါတယျ။ စာပိုဒျတှေ ဘာတှဆေိုလညျး အစကို ရောကျသှားတာမြိုးပေါ့
Microsoft Word နဲ့ အလားတူ Software တှသေုံးတဲ့အခါ စာမကျြနှာ (သို့) Document ရဲ့ အဆုံးကိုသှားလို့ရပါတယျ။ စာပိုဒျတှရေဲ့ အဆုံးကိုလညျး သှားလို့ ရပါတယျ။
အင်ျဂလိပျစာဆိုရငျ စကားလုံးတဈလုံးစီ မွနျမာစာဆိုရငျ စာစုတဈစုစီ ဘေးဘယျဘကျကို ရှလေို့ရပါတယျ။ (ဥပမာ I’ll be by your side မှာ side ရဲ့ အဆုံးမှာ cursor ခပြွီး ctrl+Left arrow key ကို နှိပျလိုကျမယျဆိုရငျ side ရဲ့ s အရှကေို့ cursor ပွနျရောကျသှားမှာပါ။ )
အင်ျဂလိပျစာဆိုရငျ စကားလုံးတဈလုံးစီ မွနျမာစာဆိုရငျ စာစုတဈစုစီ ဘေးညာဘကျကို ရှလေို့ရပါတယျ။
START menu ကိုဖှငျ့လို့ရပါတယျ။
Alt (Alter Key) နဲ့တှဲဖကျသုံးရသော Shortcut မြား
Alt+F4 လကျရှိသုံးနတေဲ့ Software (သို့) Program ကို ပိတျလို့ရပါတယျ။
Alt+F လကျရှိသုံးနတေဲ့ Software (သို့) Program ရဲ့ File menu ကို ဖှငျ့လို့ရပါတယျ။
Alt+Tab လကျရှိသုံးနတေဲ့ Software တှေ၊ Program တှေ တဈခုကနေ တဈခုကိုပွောငျးလို့ရပါတယျ။
အခွား Shortcut မြား
F2 File (သို့) Document ရဲ့ နာမညျကိုပွောငျးလို့ရပါတယျ။
Home စာကွောငျးရဲ့ အစကို သှားလို့ရပါတယျ။
End စာကွောငျးရဲ့ အဆုံးကိုသှားလို့ရပါတယျ။
Shift+Home အစကနေ လကျရှိနရောအထိ Select မှတျလို့ ရပါတယျ။
Shift+End အစကနေ လကျရှိနရောအထိ Select မှတျလို့ ရပါတယျ။
တကယျတော့ Shortcut Key တှကေ အမြားကွီးပါပဲ။ Ctrl key တှဆေိုလညျး A to Z အကုနျလုံးနဲ့ တှဲပွီး သုံးလို့ ရပါတယျ။ Alt key တှလေညျး ဒီလိုပါပဲ။ ဒါတှကေတော့ အသုံးမြားတဲ့ shortcut key တှပေေါ့နျော.. တကယျလို့ ယောငျးတို့ ဒီထကျမက သိခငျြတယျဆိုရငျ အကျဒျမငျတို့ နောကျထပျ နောကျထပျ ဆကျပွီး တငျဆကျပေးဦးမှာမို့ ကှနျမနျ့လေးသာ ပေးသှားကွနျော.. :*
Tags: Computer, Job, PC, Shortcuts, technology, work
၂၀၁၉ မှာ ယောင်းဘာတွေ ပြောင်းလဲလာမှာလဲ?
အက်ဒ်မင်မမရဲ့ ၄၅ မိနစ်စာ Cardio လေ့ကျင့်ခန်း (Gym သွားစရာလုံးဝ မလိုဘူးနော်!!!!!)
Sugar Cane December 5, 2018
လုပ်ငန်းခွင်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့သူတွေ ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အရာ (၅)ခု